SingForYou.net - Thi Chin Lay Ko Chit Tar Lar
Thi Chin Lay Ko Chit Tar Lar
Tags : ရုပ်ကိုသေသေချာချာကြည့်..သီချင်းကိုလည်းသေသေချာချာနားထောင်...ပြီးရင်မြန်မြန်စဉ်းစား...နောက်ကျရင်တာဝန်မယူပါ..........ဟိဟိဟိဟိ.......
Joined:Jan 4, 2009
By : myobala on Nov 26, 2009
Score: 94 Rating: 4.95 Comments: 32
Thi Chin Lay Ko Chit Tar Lar's Description
apound on Jun 21, 2011 0
luphyu4 on Jan 3, 2011 0
nahyone on Dec 27, 2010 0
hippo on Oct 31, 2010 0
နားထောင်လို့ကောင်းပါ့ ... *****း)
may1girl on Oct 19, 2010 0
some-body on Oct 3, 2010 0
ရုပ်ကိုသေသေချာချာကြည့်တယ်..သီချင်းကိုလည်းသေသေချာချာနားထောင် တယ်...ပြီးရင်မြန်မြန် လည်းစဉ်းစား.တယ် အဖြေမတွေ့ပါ...
myobala on Oct 17, 2010 0
အော်.....ဒါဆိုရင် ရုပ်ကိုကြည့်တဲ့ အချိန်မှာရင်အခုန်လွန်ပြီး..သီချင်းနားထောင်တဲ့အချိန်မှာလောကကြီးကိုပါမေ့သွားလို့ဖြစ်မယ်...အချိန်မှီပါသေးတယ် ငါ့ညီမ...နောက်တခေါက်လောက်စဉ်းစားလိုက်ပါအုန်းကွယ်....ငှဲငှဲငှဲ....
Wow! Amazing Dear brother! Keep going on!
katiesnow on Apr 16, 2010 0
nar sin twar par te.
yan_naing on Dec 18, 2009 0
ako gyi yetatane ka ...,ayan mite dae byar!!!
Elvis on Dec 17, 2009 0
ရုပ်ကြည့်ပြီး ယောက်ဖ ချက်ချင်း..တော်ချင်စိတ် ပေါက်လာ၏..ဟီးးး ကောင်းတယ်..လုံးဝပဲ.... ထပ်ဆိုဦးဗျာ
snowphyu22 on Dec 12, 2009 0
kyit twar pi ...... song ko pyaw tar nawahe .....
giplay on Nov 27, 2009 0
jedi on Nov 27, 2009 0
mite tae kwar )
whitekisslay on Nov 26, 2009 0
Yote ko lae tay char kyi twer par p..voice ko lae tay char listen twer par p..my luvly koko yay....2ku lone ka perfect phit tal lol pal pyaw liet pa ya say****************nyima layy arrr payy twer p...
raindrops on Nov 26, 2009 0
^ v ^ ... I love ur vocal sooooooo... wowowowow ... phyu phyu sin sin khin par tal...I love this song sooooooo ... wowowoowow ...hman hman kan kan pyaw par tal ae lo ... and ... ma thay ma char hote bu ... thay thay char char pyay par mal ... bro gyi ka bone gyi ta par nae tu par tal ... heheh ... kyo tin tha ti pay htar mal ... aye chan tae ba wa lar ma phyat nae kwar ...taw kyar pyin yan khet mal ...yar yi lar chit tot bu naw ... heheh ... love it sooooooo ( just ur vocal... heheh ) ... ^ v ^
seven on Nov 26, 2009 0
bro yay...arr pay twar par tal...******* lae' pay twar par tal...Face kate sa ka tort...girl tawealoke so tort...pyaw tort par bu naw...:))))))))))
achitsonethu on Nov 26, 2009 0
myobala on Nov 26, 2009 0
thant on Nov 26, 2009 0
song ko thay thay char char narr htaung par tal........ein ka ko ko ka mhar htar lo.....yote ko tot thay thay char char kyie buu.......kg tal bala yay.......d song ko kyiuk tal htin tal......khana khana so tal........******
အင်း..မကြည့်မိတာပဲကောင်းပါတယ် မမသန့်ရေ....မတော်လို့ အိမ်က ကိုကိုနဲ့ ကလေးတွေ မေ့သွားမှအခက်...ဟဟဟဟ.......မမသန့်ရေ...ကျေးဇူးပါနော်.....
paradise on Nov 26, 2009 0
aww...song ka tal...thay thay char char nar htaung par tal...sa lal sone pal.. lu ko taw...sa lal soe kyi tal woooo... aheeee.. very nice par byarrrrr...*****
very nice ဆိုတာ...ဘာကိုပြောတာလဲဟင် ...လူကိုပြောတာလား...သီချင်းကိုလား....၂ ခုစလုံးလား.....စာရင်းမှတ်လိုက်တော့မယ်နော်ဒါဆို.....ဟိဟိဟိ....ညီမလေးရေ...ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်.....
KoBurma on Nov 26, 2009 0
ဩ မေးမှမေးတတ် ပါပေတယ် ... မေးစရာလားဗျာ ... မမေးသင့်တာတွေမေးပြီး ... မမကြီးတွေ မန့် တာတွေသာဖတ်ကြည့်် ပေတော့ ... ☻ ... Şõ ǦŎŎĎ ♥ It ... ☺ ... ၅စတားစ် ....
မမကြီးတွေက စိတ်ထဲရှိတာအမှန်အတိုင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျ......သူတို့ကစိတ်ထဲရှိတာရဲ့ပြောင်းပြန်ပြောတတ်တာ.........အဘ ကစိတ်ပြောင်းချင်နေပြီထင်တယ်.......မရဘူးအဘရေ......ကောင်မလေးတွေအတွက်ပဲံသီးသန့်ပါဗျာ...ဟဲဟဲ...စိတ်မရှိပါနဲ့.....
panshwe on Nov 26, 2009 0
မကြည့်ဘူး မကြည့်ဘူး .. အသံပဲနားထောင်တော့မယ်.. ဟားဟား .။ ***********
ဟိတ်!!! မကြည့်ဘူးမကြည့်ဘူးနဲ့ ခိုးကြည့်နေတာ ဘယ်နှစ်ခေါက်ရှိပြီလဲ...ရှက်တောင်လာပြီ...ဟိဟိ.......ညီမငယ်လေးရေ......စိတ်မဆိုးပါနဲ့ကွယ်...အားပေးသွားတာကျေးဇူးပါကွယ်....ညီမလေးကင်မရာနဲ့ဆိုထားတဲ့ပုံပြန်ဖျက်လိုက်တာလား...သေချာတောင်မကြည့်လိုက်ရဘူးကွာ...သူများတွေပြောတာတွေ့တာတော့အရမ်းချောဆိုပဲ........နာတာပဲမတွေ့လိုက်ရတာ....ဟိဟိ....
winwinthant on Nov 26, 2009 0
YinLiHoe on Nov 26, 2009 0
Woo Ko BaLa Gyi ... Kyun Taw So Poe List loke Htar Tae Ta Chin Lay Bar.. I also Like This song. Kg Bar Tel.. Bro Bala Gyi Yay.... Ko Bala Toe Si Mar Taut Ma Thi Buuu. D Mar Thanksgiving Lay... Web Camp A Kg Sar Wel Poe A Kyan Pay Bar Tel.. Ta Chin Nae Luu Nae Ta Htut Tel Phit Ag Loe... Tomorrow is Black Friday. Most of Electronic like computer accessories are really cheap....***** I don't need to care about your notes. OK!! Also That is not for me ....Right Haa Haaaa Haaaaaaaa
ကို yinlihoe ရေ....အခုလို အားလည်းပေး အကြံလည်းပေးတာကျေးဇူးပါဗျာ......ကျွန်တော်က laptop မှာပါတဲ့ ကင်မရာနဲ့စမ်းဆိုကြည့်နေတာဗျ....webcam သိပ်မကောင်းတာပဲကောာင်းပါတယ်ဗျာ.....ဒီလောက်နှိပ်စက်ရ ရင်ပဲကျေနပ်ပါပြီ....ဟိဟိ....
SKB on Nov 26, 2009 0
ကိုမျိုးဗလ ကတော့ ရုပ်နဲ့ လုပ်စားနေပြီ ဟားဟား ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ ဆိုထားတယ်နော့်
တော်ကြာဆရာသမား က ဟေမာဗလ လုပ်နေမှာကြောက်လို့ပါဗျာ......ဟိဟိ......ကျေးဇူးပါနော်....
Rating : 4.83
Feedback : 5
Rating : 4.95
Feedback : 32
Feedback : 35
Feedback : 12
Subscribe to myobala